HAWEENKA SOOMAALIYA OO KA GUULEYSTAY LA DAGAALANKA XADGUDUBKA GALMADA EE WADANKA - iftineducation.com
iftineducation.com – Khadiijo Maadey (magaceeda runta ah maaha), 28 jir ah, ayaa jidh ahaan iyo maskaxba u dhibaateysan ka dib markii si waxashinimo ah loogu kufsaday xerada barakacayaasha gudaha (IDP), 13 kiiloomitir u jirta magaalada Muqdisho.
“Iyagoo bastoolada iyo mindi ku hubeysan ayay soo galeen gurigeyga oo albaab laan ah. Labadaba way I kufsadeen. Wiilkeyga 10 jirka ah wuu qayliyay balse afka ayay ka xireen. Waxay ugu janjabeen inay dilayaan haduusan aamusin,” ayay tiri iyadoo ilmeynaysa.
“In kastoo xanuunka ugu danbeyntii iga suulay, fikirrada habeenkaas laga baqdo wali kama bixin maskaxdayda. Mararka qaar waxaan dareemaa inan ahay qof laga adkaaday oo rajo la’aan ah. Waxaan isku dayay inan ka gudbo dhacdada laakiin fikirka ayaa igu soo laab laabta.. Waa in aan si joogto ah ula dagaallannaa dembigan, “ayay tiri.
Baahida loo qabo in la soo afjaro xadgudubyada galmada aad ayay u weyn tahay, waxaa kaloo jira dadaallo wadajir ah oo ay sameynayaan Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya, Qaramada Midoobay, hay’adaha aan dawliga ahayn ee caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah iyo bulshada caalamka. Dadaallada wadajirka ah ayaa keenay guulo la taaban karo iyada oo loo marayo fulinta Qorshe Howleedka Qaran ee ciribtirka Xadgububyada Jinsiga iyo Colaadda ee Soomaaliya, iyadoo la aasaasay Guddiga Joogtada ah, oo ay wada shir guddoomiyaan Wasaaradda Haweenka, Xuquuqda Aadanaha iyo Horumarka iyo UNSOM. HINNA sidoo kale waa qayb ka mid ah ururada guddiga oo door muhiim ah ka ciyaara Hirgelinta Qorshe Howleedka Qaran oo lagu baabi’nayo Xadgudubka Galmada xiliyada colaadda.